We.com.mm - ပိတ်ရက်မှာ ကျောက်ပွင့်သုပ်လေး သုပ်စားရအောင်
ပိတ်ရက်မှာ ကျောက်ပွင့်သုပ်လေး သုပ်စားရအောင်
ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ WE မှအစားတလိုင်း ချစ်ချစ်တို့ အတွက် ကျောက်ပွင့်သုပ် လုပ်နည်းလေးကိုပြောပြပေးပါ့မယ်။ ပိတ်ရက်မှာ အလွယ်တကူ လုပ်စားလို့ရတာပေါ့နော်။ ထမင်းနဲ့စားရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်။ ဒီအတိုင်းစားရင်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် အဆင်ပြေပါတယ်။ ဒီတော့ ပါဝင်ပစ္စည်းလေးနဲ့ လုပ်နည်းလေးကို ပြောပြပေးမယ်နော်။
၁. ကျောက်ပွင့်ခြောက်ဖြူ ( ၁ ထုပ် )
၂. မြေပဲလှော် (အနည်းငယ် )
၃. ပုဇွန်ခြောက် ( အနည်းငယ် )
၄. ခရမ်းချဉ်သီး ( ၁ လုံး )
၅. မုန်လာဥနီ ( ၁ လုံး )
၆. ငါးငံပြာရည် ( အနည်းငယ် )
၇. ဆီ ( အနည်းငယ် )
၉. အချိုမှုန့် ( အနည်းငယ် )
၁၀. ငရုပ်သီးအကျက်မှုန့် ( အနည်းငယ် )
၁. အရင်ဦးဆုံး ကျောက်ပွင့်ကို ရေစိမ်ထားပါ။ ကျောက်ပွင့်တွေ ရေစိမ်ပြီး ပွလာပြီဆိုရင် ညှစ်ထားလိုက်ပါ။
၂. ခရမ်းချဉ်သီး၊ မုန်လာဥနီ တို့ကို ရေပြောအောင်ဆေးပြီး ပါးပါးလေးတွေ လှီးထားပါ။
၃. မြေပဲလှော်နဲ့ ပုဇွန်ခြောက်ကို ဆုံထဲမှာ ကြေနေအောင်ထောင်းပါ။
၄. သုပ်မယ့် ဇလုံထဲသို့ ကျောက်ပွင့်၊ ခရမ်းချဉ်သီး၊ မုန်လာဥနီ၊ မြေပဲ၊ ပုဇွန်ခြောက်၊ ဆီ၊ ဆား၊ အချိုမှုန့်၊ ငရုပ်သီးအကျက်မှုန့်တို့ကို ထည့်ပြီး သုပ်လိုက်တာနဲ့ အရသာရှိတဲ့ ကျောက်ပွင့်သုပ်ကို ရရှိပါပြီနော်။ ချဉ်စပ်လေး စားချင်ရင်တော့ သံပုရာရည် ဖြစ်ဖြစ်၊ မန်ကျည်းရည် ဖြစ်ဖြစ် ထည့်လို့ရပါတယ်။
တစ်နေ့သီဟိုဠ်စေ့(၄)စေ့စားခြင်းဖြင့် လှပကျန်းမာတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကို ဖန်တီးလိုက်ပါ
ထိုင်းငပိထောင်း စပ်စပ်လေး ထောင်းစားကြမယ်
မြန်မာလူမျိုးတို့ ခံတွင်းတွေ့ကြနေတဲ့ စားစရာ (၅) မျိုး
သင့်ခန္ဓာကိုယ်ကို ရေဓါတ်ဆုံးရှုံးစေနိုင်တဲ့ အစားအသောက် (၄) မျိုး
ကိုရီးယားခေါက်ဆွဲ အသားကင် (Korean Noodle with Grilled Pork)
စက်တင်ဘာလ မှာ ကံအကောင်းဆုံး တွေ ရရှိမယ့် ရာသီခွင် ၄ ခု
ကလေးဆေးရုံတွေကို နာမည်မဖော်ဘဲ နှစ်ပေါင်းများစွာငွေကြေးထောက်ပံ့ခဲ့တဲ့ ကီးနူးရီးဗ်စ်